Ashabaab oo weerar ku qaaday Garoonka Magaalo la filayo inay Doorasho ka dhacdo iyo faahfaahin - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Ashabaab oo weerar ku qaaday Garoonka Magaalo la filayo inay Doorasho ka dhacdo iyo faahfaahin - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ashabaab oo weerar ku qaaday Garoonka Magaalo la filayo inay Doorasho ka dhacdo iyo faahfaahin
Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxeysa weerar Alshabaab ku qaaday garoonka Diyaaradaha degmada Baraawe oo ka mida magaalooyinka lagu wado inay ka dhacdo Doorashada Golaha Shacabka.
Weerarka Alshabaab kadib ayaa dagaal culus dhex maray Ciidamada Milaterige oo guul ka sheegtay dagaalka, waxaana war kasoo baxay Taliska Milateriga lagu sheegay inay jab xoogan la gaarsiiyay Maleeshiyaadkii Al Shabaab ee weerarka ku qaadayGaroonka Diyaaradaha magaalada Baraawe.
Ciidamada dowladda ayaa sheegay inay dagaalka ku dileen5 ka mida maleeshiyaadkii Al Shabaab, isla markaana ay gacanta ku dhigeen hubkii ay wateen.
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Jeneraal Odowaa Yuusuf Raage ayaaa Raadiyaha Ciidamda u sheegay in ciidanka xoogga dalka ay u diyaarsan yihiin ka hortaga Argagaxisadda.
Previous articleXOG: Laba Qodob oo caddeyn u ah inuu RW Rooble hortaagan yahay dedejinta Doorashada
Next articleMareykanka oo Dalab cusub u diray madaxda maamul Goboleedyada iyo Dhaqaale diyaar u ah Doorashada